प्रहरीका १८ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १८ डीएसपीको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको शुक्रबारको निर्णयअनुसार उनीहरूको सरुवा गरिएको हो ।
फागुन महिनादेखि तलब भत्तासमेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी सरुवा गरिएको हो ।
निर्णयअनुसार इन्द्रबहादुर रानाको इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीमा सरुवा भएको छ भने कुमार विक्रम थापाको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारत र अमेरिकाद्वारा नेपाल प्रहरीको तालिममा कटौती
यसैगरी दान बहादुर थापाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा सरुवा भएको छ ।
को कहाँ सरुवा? सूची :